सुशान्त प्र’करण: ध’रौटीमा छु’टेकी रिया चक्रवर्तीलाई फेरी देखियो प्र’हरी चौ’कीमा – Articles Nepal
सुशान्त प्र’करण: ध’रौटीमा छु’टेकी रिया चक्रवर्तीलाई फेरी देखियो प्र’हरी चौ’कीमा
२३ असोज काठमाडौं: सुशान्त सिंह आ’त्मह’त्या प्र-करणमा जोडिएको ड्र ग्स मा’मिलाकी मुख्य आ’रोपी रिया चक्रवर्तीलाई हाइको’र्टले बुधबार ज’मानतमा छाडेको छ। ड्र’ग्स ओ’सारपसार र प्रयोगको आ’रोपमा एक महिना पहिलेदेखि रियालाई एनसिबीले न्या’यिक हि’रासतमा राखेको थियो। करिब एक महिनापछि रियाले आफ्नो परिवारलाई भेटेकी छन्।
बुधबार मात्र हि’रासतबाट छु’टेर घर पुगेकी रिया बिहीबार मुम्बईको सान्ताक्रुज पु’लिस स्टेसनबाहिर देखिएकी छन्। स्टे’सनबाहिरका रियाका फोटोहरू यतिबेला सामाजिक सञ्जालहरूमा भा’इरल भैरहेका छन्। खबरका अनुसार रिया आफ्नो कागजी प्र’क्रिया पूरा गर्न स्टेसन आएकी थिइन्। रियालाई बम्बे हा’इकोर्टले एक लाखको ध’रौटीमा रि’हा गरेको हो।
रियाको पा’सपोर्ट को’र्टले नै राख्ने, मुम्बईदेखि बाहिर जानको लागि रियाले को’र्टको अ’नुमति लिनुपर्ने, जुनसुकै बेला रियालाई सो’धपुछका लागि बोलाउन सकिने छ आदि स’र्तमा को’र्टले रियाको रि’हाइ गरेको हो।
Previous Post: आइपिएलमा आज:हैदराबादसँग पंजावको लज्जास्पद हार; रसिद खानको उत्कृष्ट बलिंग
Next Post: डा. गोविन्द केसीको अवस्था झन् जटिल बन्दै; सरकारी पक्ष बार्ता गर्न किन गर्दैछ ढिलाई??